အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်ငွေလွှဲ SWIFT အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ဆပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
လျင်မြန်သောငွေပေးချေမှုကဘာလဲ? အသုံးပြုမှုအဆင်ပြေစေရန်, အမြန်နှုန်းနှင့်လုံခြုံရေး
ယခုအချိန်တွင်ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်များ 10 နိုင်ငံများတွင်ထက်ပို 210 တထောင်ဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်ကြသည်။ ဤသူသည်သင်တို့အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံများအတွက်အမျိုးမျိုးသောငွေကြေးနိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုပေးပို့နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
အွန်လိုင်း SWIFT စနစ်ကနေတဆင့်ငွေလွှဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အတော်များများကဘဏ်တွေနေအိမ်စွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲသင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်မှအွန်လိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ SWIFT လွှဲပြောင်းပေးပို့နိုင်စွမ်းသည်။
ထို့နောက်လက်ခံရရှိသူ ပတ်သက်. လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုဖြည့်စွက်, နိုင်ငံတကာလွှဲပြောင်း၏အမျိုးအစားသို့သင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့် ( "Internet ဘဏ်လုပ်ငန်း", "အွန်လိုင်း client ကို") login အခြားတိုင်းပြည်ပိုက်ဆံပို့ပေးရန်, သင်အလွယ်တကူမှာပြည်ပမှာပိုက်ဆံပို့နိုင်ပါလိမ့်မည် လက်ခံသူများ၏စရိတ်။
မေးခွန်းတွေအသွင်အပြင်၏အမှု၌, သင်သည်သင်၏ Bank မှမခေါ်နှင့်ပိုပြီးအသေးစိတ်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်ကိုရယူနိုငျပါသညျ။
သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်မဆိုဘဏ် SWIFT လွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဘဏ်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရီးစဉ်နှင့်တစ်ဦးငွေပေးငွေယူပြုပါနှင့်ဘဏ်ဝန်ထမ်းထံသို့တိုက်ရိုက်လက်ခံသူနှင့် ပတ်သက်. ဘဏ်သတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့သင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြပါ။ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများငွေသွင်းငွေထုတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် 15 မိနစ်ထက်ပိုမယူပါလိမ့်မယ်, သင်တို့အဘို့အားလုံးဖြစ်စေဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်။
ပြည်ပမှာပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းရန်ဖောက်သည်အပြည့်အဝ SWIFT လွှဲပြောင်းလှေတျတျောမူပါလိမ့်မည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ, အသေးစိတ်သိရန်လိုအပ်ပါသည်။
- အကျိုးခံစားခွင့်ရှိဘဏ်၏အမည် (ဥပမာ Bangkok Bank PUBLIC CO..LTD)
- ထို SWIFT စနစ်ကုဒ် (ဥပမာ BKKBTHBK )
အဆိုပါ SWIFT အောက်ပါကိစ္စရပ်များတွင်တစ်ဦးလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်းများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ပါသည်:
သို့သော်က SWIFT စနစ်ဖျော်ဖြေအားလုံးစစ်ဆင်ရေးလုံးဝလုံခြုံဖြစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။
ထိုသို့ငွေကြေးဆိုင်ရာ, တာဝန်အပါအဝင်အားလုံး, စနစ်သူ့ဟာသူခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ယုတ္တိနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များများ၏ပေါင်းစပ်အကူးအပြောင်းအတွက်မဆိုစသောအပြောင်းအလဲခွင့်ပြုမထားဘူး, မှတပါး, အထူး encryption ကိုကမဖြစ်နိုင်တာ SWIFT မှတဆင့်၎င်း၏ဂီယာစဉ်အတွင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့စေသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်လက်ခံသူ မှလွဲ. ဘယ်သူမှသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်နိုင်သည်။
ပြည်ပမှာ SWIFT လွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း၏မြန်နှုန်း?
အများအားဖြင့်ငွေကို 24 နာရီ (အလုပ်လုပ်ကိုင်ရက်) အတွင်းလက်ခံသူမှရောက်ရှိလာသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်၏အမြင့်ဆုံးကာလလက်ခံသူအကောင့်ပေါ်မှာဖြစ် 3-5 ရက်ပေါင်းယူလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏အမိန့်အဘို့အလျင်မြန်ငွေပေးချေမှုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်ကျေးဇူးပြုပြီးလက်ခံရရှိရန် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ